IETT Yakatakurwa Vaperekedzi Zvakawanda seChinese Chavanhu mu2019 - RayHaber | raillynews
mushaTURKEYDunhu reMarmara34 IstanbulIETT Yakatakurwa Vaperekedzi Zvakawanda seChinese Chavanhu mu2019
11 / 01 / 2020 34 Istanbul, IETT, Railway, GENERAL, HIGHWAY, KENTİÇİ Rail Systems, masangano, Tire Wheel Systems, musoro wenyaya, Dunhu reMarmara, Metrobus, TURKEY, chitima
iett da kudzamara huwandu hwehuwandu hwemwedzi hwasvika uye vakatakura vafambi
Bhazi reIETT, Metrobus, Tunnel nematanho emadhiamu zvakafambisa vafambi zvakaringana nehuwandu hweChina mu2019. Makumi matanhatu nemakumi mana nemana 6 mota dzakaita 274 miriyoni 18 zviuru zvekubuda, makumi matanhatu nemapfumbamwe kuenda kumwedzi yaive yakareba kuti vaende.
Muna 2019, huwandu hwevapfuuri vanofamba mumabhazi, Metrobus, Tunnel uye nespalgic tram ye İETT General Directorate ye İBB yakabatana makambani nemotokari dzePublic Public Bhazi uye Bhazi Inc. mukutarisirwa kwe İETT yakawedzera nezvikamu gumi muzana.
Mugore ra2019, vanhu vanosvika zviuru zvisere nemazana masere nemakumi mana nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nemaviri nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi nemashanu, uye zvinoenderana nehuwandu hweChina, zvakafamba nemarubhoti zvine mawiriketi ekufambisa eruzhinji muIstanbul. Zviuru zviuru mazana mana nemakumi mairi nemakumi mana nemashanu emabhazi, mamirioni gumi nemakumi mapfumbamwe nemakumi manna neshanu zviuru zvisere 1 zvaita nguva. 364 miriyoni mazana matanhatu negumi nemashanu emakiromita gumi nemashanu makiromita enguva idzi dzakafukidzwa. Huwandu uhu hwakaenzana makumi matanhatu nenhanhatu nhanho dzekutenderera-kureba kusvika pamakumi mazana mana nemasere mazana mana emakiromita kure nenyika.
Kune rimwe divi, huwandu hwevanhu vanofamba mubhazi muIstanbul, yaive mazana masere nemakumi masere nemakumi manonwe nemakumi manonwe nemakumi manonhatu nemakumi matanhatu nemakumi mana nemaviri 2018, vakakwira kune bhiriyoni imwe mazana matanhatu nemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nenomwe 963 zviuru zviviri muna 485. Muna 646, IETT yakawedzera huwandu hwemakumi matanhatu nemakumi matanhatu nematanhatu inoshanda kuma2019 kumira kusvika ku1.
Huwandu hwevapfuura pamutsetse weMetrobus, unoshanda vagari vemuIstanbul 7/24, zviuru mazana masere nemakumi masere nemasere 44 zviuru zvina makumi matanhatu nenomwe makore mazana matanhatu negumi apfuura uye wakawedzera zvikamu zvishanu pagore ra283 kusvika pamamiriyoni mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nemapfumbamwe negumi neshanu.
Muna 2018, Nostalgic Tram neT Tunnel, kwaakafamba mamirioni mazana mana nemakumi mana nemashanu nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi mairi nemakumi nemairi nemakumi maviri nemashanu.
Mutyairi akatakura zvakadai seChina neUnited States nekutakura kwevanhu muIstanbul
KutakuraParkPashamba Mabhazi Akasimudzirwa Kocaeli Mhuri muMwedzi
İZBAN 9 Makore Vakwegura 'Anotakura Vapfuuri Zvakanyanya Sevanhu vekuEurope'
Estram Anotakura Vanhu Sevanhu Vakawanda vePoland
Last Gore Times Ini Turkey Population Up People 4.5 Vehicle
IMM yakati 'metrobus mutakuri wakawanda sehuwandu hweAmsterdam'.
IETT 5 inotakura vatakuri kusvika kunyika gore negore
Eskişehir's Population Yakawedzerwa Nechitima
Mirairo mikuru muIstanbul ichawedzera huwandu kusvika ku 1 mamiriyoni muBasaksehir
IETT yakaendesa vanhu vane 1,2 mabhiriyoni gore rapera
Mangani Vafambi Vandinotakura IETT Kutakura?
Vangani vatengesi vakatamiswa
IETT yeruzhinji yekufambisa
IETT tram mitsara
taksim tunaki metro mutsara